यसरी हुन्छ कपालको तस्करी, केका लागि प्रयाेग हुन्छ काटेकाे केश, कपालको तस्करीका विषयमा चर्चा चल्न थालेको छ हेर्नुहोस !! - Aajako Nepali Khabar
यसरी हुन्छ कपालको तस्करी, केका लागि प्रयाेग हुन्छ काटेकाे केश, कपालको तस्करीका विषयमा चर्चा चल्न थालेको छ हेर्नुहोस !!
दुई महिना पहिले भारत र म्यानमारको सीमाबाट जफत भएको मान्छेको कपालको मुद्दाले भारतको आन्ध्र प्रदेशको राजनीतिमा तरंग ल्याएको छ । उक्त कपाल तिरुमला तिरुपती देवस्थानम् (टीटीडी) बाट तस्करी भएको आशंका गरिएको छ ।
मुन्डन गरिएको कपालको तस्करीका विषयमा चर्चा चल्न थालेको छ । जफत भएको कपालको मूल्य करिब १ करोड ८० लाख भारतीय रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको छ । असाम राइफल्सको एक सर्च टीमले मिजोरम राज्यबाट लैजाँदै गरेको अवस्थामा दुई महिनाअघि म्यानमारको सीमाबाट कपाल बरामद गरेको थियो ।
१२० बोरा कपालले भरिएको ट्रक
सामान्यतया मिजोरम क्षेत्रमा जंगली जनावर र सुन तस्करी हुने गरेको भए पनि पहिलो पटक १२० बोरा मान्छेको कपाल बरामद भएको हो । प्रत्येक बोरामा करिब ५० किलो कपाल रहेको जनाइएको छ । ट्रकसँगै पक्राउ परेका ड्राइभरले कपाल तिरुपति मन्दिरबाट ल्याइएको बताएका थिए । मारुयती नाम गरेकी एक महिलाले आफूलाई कपाल ओसार्ने ठेक्का दिएको ड्राइभरले बयान दिएका अधिकारीहरुले बताएका थिए ।
देशभरका अन्य मन्दिरहरुबाट पनि कपाल ल्याउने तयारी भइरहेको अवस्थामा सो ट्रक पक्राउ परेको अधिकारीलाई उदृत गर्दै भारतीय पत्रिका द हिन्दुले जनाएको थियो । भारतबाट तस्करी भएको यो कपाल म्यानमार हुँदै थाइल्यान्ड पुग्छ । त्यहाँबाट यसलाई तयार गरेर चीन पठाइने गरेको बताइएको छ ।
चीनमा ‘विग’ बनाउने कारोबार
अधिकारीहरुका अनुसार तस्करी गरिएको कपालबाट चीनमा विग बनाइन्छ जसलाई विश्वभर बिक्री गरिन्छ । विज्ञहरुका अनुसार विग बजारमा चीनको मात्र ७० प्रतिशत हिस्सा छ । भारतका केही मन्दिरहरुमा कपाल चढाउने प्रथा भएकाले यहाँ सहज रुपमा कपाल उपलब्ध हुन्छ ।
भारतमा टाउकोको कपाल सबैभन्दा धेरै तिरुपति मन्दिरमा नै दान गरिन्छ । यहाँ दैनिक ५० हजार श्रद्धालु दर्शन गर्न आउने गरेका छन् । यीमध्ये कम्तिमा पनि एक तिहाइले आफ्नो कपाल दान गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०२०–०२१ मा टीटीडीले कपाल बेचेर मात्र १३१ करोड कमाएको थियो । टीटीडीको वार्षीक बजेट करिब तीन हजार करोड छ ।
सबैभन्दा धेरै कपाल बेच्छ टीटीडी
पहिले प्रत्येक महिना तिरुमलामा लिलामीमार्फत् मुन्डन गरिएको कपाल बिक्री गरिन्थ्यो । तिरुमलाबाट कपाललाई तिरुपतिको भन्डारमा लगिन्छ । त्यसपछि कपाललाई ५ श्रेणीमा विभाजन गरी रंग र लम्बाइका आधारमा लिलामी गरिन्छ । तर, अहिले तीन महिनामा एक पटक मात्र लिलामी हुने गरेको खुलेको छ ।
टीटीडीको आधिकारीक भनाइ अनुसार सन् २०१९ मा उसले कपाल बिक्री गरेर ७४ करोड आम्दानी गरेको थियो । २०१९ को डिसेम्बरमा ५४ हजार ५ सय किलो कपाल ३७ करोड २६ लाखमा लिलाम भएको थियो ।
विपक्षी तेलुगूदेशम् पार्टीले म्यानमारको सीमाबाट मुन्डन गरिएको कपाल पक्राउको जिम्मेवारी टीटीडीका अधिकारीले लिनुपर्ने बताएको छ । यस विषयमा जाँच गरेर यसमा जोडिएकाहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । टीटीडीले सुरुमा लिलामीमा ठेक्का दिइसकेपछिको कुरा आफूहरुलाई जानकारी नहुने जनाएको थियो ।
पछि उसले तस्करी गर्ने कम्पनीको नाम पत्ता लागेमा त्यसलाई कालोसूचीमा राख्ने बताएको छ । टीटीडीमार्फत् नै कपाल तस्करी हुने गरेको सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरुले दाबी गरिरहेका छन् । प्रहरीले टीडीपी पार्टी र अन्य केही व्यक्तिहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
माओवादीद्वारा २ मेयर र पाँच उपमेयरलाई पार्टीबाट निष्कासन हेर्नुहोस के काराण ले भए निष्कासन !!!
हालसम्मकै ठूलो आईपीओ निष्काशन गरेको (NIFRA) नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो? हेर्नुहोस आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ !